Ungazilungisa Kanjani Izinkinga Zami ku-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 606
Nge Isikhungo Sosizo se-Twitter, Umsebenzisi angaxazulula izinkinga ezihlobene ne-Akhawunti Yakhe Yomsebenzisi: Ukungena ngemvume, i-Akhawunti Emisiwe, Iphrofayela Egqekeziwe futhi uthuthukise ukuphepha kwe-Akhawunti yakhe endaweni yesikhulumi.
Umsebenzisi angaxazulula izinkinga zezindaba ezijwayelekile zokusetshenziswa: Izaziso, izithombe namavidiyo, imibuzo ehlobene nePhrofayili yakhe, Inkohliso yomazisi, ukuhlukumeza noma ukuhlukumeza, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi noma ugaxekile nokuqukethwe okubucayi.
Umsebenzisi waziswa esikhungweni sosizo se-Twitter sakhe Imithethonqubo nezinqubomgomo Ukusetshenziswa kwenethiwekhi yokuxhumana nabantu; Lokhu kuzokukhombisa lapho wenza ukushicilelwa, ubamba iqhaza ezingxoxweni, kuMilayezo, ukuze ungenzi noma yiluphi uhlobo lokuhlukumeza futhi wephule imithetho.
Isici esisha se-Twitter Tip Jar
I-Twitter ibike okusha umsebenzi obizwa ngeTip Jar, ngeSpanishi kusho imbiza yamathiphu; okuzokwenza ukuthi uMsebenzisi akhokhele abanye nge-Tweet edonsa iso, evuselelayo, enokuqonda futhi ekhuthazayo.
Ngokuya nge-Twitter, Umsebenzisi uyazi ukuthi a I-akhawunti inikwe amandla ku-Tip Jar lapho ubona isithonjana seTip Jar eceleni kwenkinobho ethi Landela ekhasini lakho lePhrofayela. Ukuze ukhokhe, kufanele uchofoze kusithonjana nemenyu yokukhokha uMsebenzisi ayinike amandla izovela.
Okulandelayo, khetha ukuthi iyiphi insizakalo yokukhokha oyithandayo futhi ezoba yiyo idluliselwe kusuka ku-Twitter kusayithi lapho ungakhombisa khona ukusekelwa kwakho kunani olikhethayo. I-Tip Jar ifaka izinsizakalo ezinjenge: PayPal, Venmo, Patreon, Cash App neBandcamp.
KUNGANI UKUBEKA IMITHOMBO YOMTHOMBO KU-TWEET?
Indima ye Amathegi wefonti I-del Tweet ukusiza uMsebenzisi ukuthi abone kangcono ukuthi i-Tweet ishicilelwe kanjani. Amathegi anjalo, engeza umongo owengeziwe kuTwitter nakumbhali wayo, okwenza kube lula ukutolika nokuqonda inhloso yayo.
Uma uMsebenzisi angawazi umthombo, udinga thola eminye imininingwane bese unquma ukuthi okuqukethwe kunokwethenjelwa yini; Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthi: Chofoza ku-Tweet ukuya ekhasini lemininingwane; ezansi kweTweet iTag Source, ngokwesibonelo: iTwitter ye-Android.
Ithegi yeTwitter Yabakhangisi kumaTweets ikhombisa ukuthi amaTweets enziwe kusetshenziswa i- Umdali wezikhangiso ze-Twitter. Kwezinye izimo, Umsebenzisi angabona ukuthi amanye amaTweets avela kuhlelo lokusebenza okungelona olwe-Twitter.
Xoxa eyakho indaba ku-Twitter
Uma Umsebenzisi efuna xoxa eyakho indaba, I-Twitter inikeza le misebenzi: Dala intambo yamaTweets ngenhloso yokuthola umthelela omkhulu, thola umphakathi wakho ngezihloko nangezinhlu, uhleleke futhi usize ekusakazeni igama nge-hashtag.
Ngaphezu kwalokho, uMsebenzisi kumele aba njalo ngomphakathi wakho usebenzisa ama-Retweets ubeke amazwana noma cha, thumela izithombe namavidiyo nabalandeli bakho nomphakathi wakho ukuze uthinte wena uqobo.
Umsebenzisi udinga ukwabelana ngokwenzekayo okwamanje izikhathi ezibukhoma; futhi wenze ngezifiso iPhrofayili yakho, lapha i-biography kufanele ihlale ivuselelwa nomyalezo wakho wakamuva othunyelwe phezulu.
1 Isici esisha se-Twitter Tip Jar
2 KUNGANI UKUBEKA IMITHOMBO YOMTHOMBO KU-TWEET?
3 Xoxa eyakho indaba ku-Twitter
Ungabasebenzisa kanjani abalandeli ku-Facebook?